Antson’ny Firenena mikambana : 1,5 tapitrisa euros hanampian’ny Frantsay ny any atsimo | NewsMada
Antson’ny Firenena mikambana : 1,5 tapitrisa euros hanampian’ny Frantsay ny any atsimo
Mamaly ny Antso tselatra nataon’ny Firenena mikambana hiadiana amin’ny kere ny firenena frantsay. 1,5 tapitrisa euro avy amin’i Frantsa ho an’ny faritra atsimo hiadiana amin’ny kere sy ny haintany.
Fanampiana sakafo voalohany voalahatra ho an’ny taona 2021 ataon’i Frantsa ho an’i Madagasikara. Ho an’ny tetikasa efatra ny famatsiam-bola, hanampy olona maherin’ny 50 000. Tetikasa voafantina, mifanaraka amin’ny laharam-pahamehana amin-dry zareo Frantsay amin’ny lafiny fanampiana sakafo. Miparitaka amin’ny faritra tena tsy ieren-doza, indrindra ny fiarovana amin’ny sakafo ary natao hanatsarana ny toe-piveloman’ny mponina voakasik’izany.
Voalohany, 750 000 euros ho an’ny Pam, hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo amin’ny alalan’ny fampitomboana ny fahazoan’ny vehivavy bevohoka sy mampinono (maherin’ny 1 200) sy ny ankizy 6 ka hatramin’ny 23 volana (sahabo 1 800) sakafo mahavelona mifanaraka sy ny hitsaboana zaza. 20 000 isa ireo enina ka hatramin’ny 59 volana tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Tsy voa mafy loatra ny any amin’ny distrikan’ Ampanihy, faritra Atsimo Andrefana.
Faharoa, 300 000 euros ho an’ny Fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana (Gret Matihanina) mifameno amin’ny tetikasan’ny Pam satria mikendry faritra samihafa ihany koa, mahakasika ireo kaominina roa lehibe ao amin’ ny distrikan’Ambovombe, fa­ritra Androy, tena iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Tanjona ny hanamafisana ny fandraisana an-tanana ireo ankizy tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika sy antonony; ny hanohizana ireo asa momba ny sosialy ho an’ny renin’ny zaza enina hatramin’ny 24 volana, ny vehivavy bevohoka sy ny mampinono mandritra ny vanim-potoana maitsoahitra, ary hanatsarana ny fomba fanao sakafo. Ha­nohanana ireo asa ireo ny fanampiana amin’ny alalan’ny fanabeazana ny mponina.
Mifameno amin’ny tetikasa Pam
Fahatelo, 250 000 euros ho an’ny Action contre la faim (ACF) hanatsarana ny fiarovana momba ny fivelomana ho an’ireo vondrona marefo, amin’ny fanatsarana ny fahazoana tolotra fandraisana an-tanana ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika, ary amin’ny fanamafisana ny fivondronam-behivavy ho an’ny faharetana, ny fizakan-tena sy ny fahama­roan’ny karazana sakafo. Mifameno amin’ny tetikasan’ ny Pam izy io. Tanjona ny hanohanana ny fizakan-tena sy ny faharetan’ny tokantrano.
Fahefatra farany, 200 000 euros ho an’ny Humanité et inclusion (HI), hanome fa­nampiana vonjy maika sakafo ho an’ireo olona manana fahasembanana sy ny ankohonany ao amin’ny faritra Atsimo Andrefana hampihenana ny loza mety hitranga mifandraika amin’ny haintany, sady manohana ny ankizy sembana 0 ka hatra­min’ny 5 taona mijaly amin’ny tsy fanjarian-tsa­kafo.